Home Wararka Ifafaalo dagaal oo maanta ka jirta tuulooyinka & degaanada hoos yimaada...
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya Galgaduud, xaaaladda Gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa saaka ah mid cakiran, xili qaar ka mid ah Magaalooyinka Gobolkaasi laga dareemayo xaalad kacsaanan ah iyo saan-saan dagaal.
Dhanka kale, Wararka aan ka helayno Gobolkaasi Galgaduud ayaa kusoo warramaya in dadka degaanka ay cabsi aad u xooggani soo foodsartay, kadib markii Tuulooyinka iyo degaanada hoos yimaada Magaalada Guriceel ay Ciidanaka Dowladda iyo kuwa Galmudug ay ka wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ay doonayaan in Ahlu-Sunna weerar lagu qaado.
Magaalada Guriceel oo ah meesha ay ugu xooggan yihiin xoogagga Ahlu-sunna ayaa saaka ah mid haawanaysa, kadib markii xalay ay isaga barakacen dadkii degaanka, oo cabsi xooggani ay soo food saarat xalay. Goobaha Ganacsiga iyo xaruumihii waxbarashada Magaaladaasi ayaa ah kuwo haawanaya, waxaana istaagay guud ahaanba isku socodkii iyo ganacsigii Magaalada.
Ciidanaka Dowladda iyo kuwo Galmudug ayaa xalay waxaa ay gaareen tuulooyin hoos yimaada Magaaladaasi, waxaana ay kaabiga ku hayaan Magaalada sida wararku sheegayaan. Sidoo kale waxaa jira warar hoose oo sheegaya in Ciidamo kale ay ku sugan yihiin Deegaanannada Haraale iyo Baraxwayne oo Waqooyi ka xiga Guri-ceel, waxaana la sheegay in Ciidankaasi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha degmada, iyadoo wararku intaasi ku darayaan in ay qayb ka yihiin diyaar garowga dagaal ka dhan ah Xoogagga Ahlu-sunna.